Imwe Kambani Yobhadharirwa Vamwe Vana Chikoro muGweru
GWERU — Zvikoro zvakavhurwa neChipiri vabereki vakawanda vakatarisana nedambudziko rekushaya mari yekubhadharira vana vavo mari dzechikoro nekuda kwekuoma kwakaita zvehupfumi munyika.
Asi vamwe vana vemuGweru vaita rombo rakanaka rekubatsirwa kubhadhara mari yechikoro neimwe kambani yemuguta iri.
Amai Anna Chikaka Kurwa vane makore makumi matatu nematanhatu ekuberekwa. Amai Kurwa nemurume wavo havashande asi sevamwe vabereki vakawanda vanoziva kukosha kwakaita dzidzo yevana vavo. Asi nekuda kwekuti vanorarama nekuita mabasa ekutengesa, mari yavo ishoma zvikuru.
Amai Kurwa nemurume wavo vange vave kuomerwa nekuwana mari yevana vavo vari kuenda kuchikoro.
Asi Amai Kurwa ndemumwe wevabereki vakaita rombo rakanaka rekuwana rubatsiro rwekubhadharirwa mari yechikoro nekambani yemuGweru inotengesa nzvimbo dzekugara, yeRiver Valley Properties, ichishanda pamwe nechechi yeChampions Ministries.
Amai Kurwa vanoti vari kufara chaizvo kuti mwana wavo, Brighton, uyo ari mugwaro rechinomwe paChikumbiro Primary School, kuMkoba, ndemumwe wevana vakawana rubatsiro urwu vachiti izvi zvave kuvarerutsira hupenyu hwavo.
Vekambani yeRiver Valley Properties nechechi yeChampions Ministry vakabhadharira vana makumi maviri vari muzvikoro zvakasiyana-siyana muGweru zvinosanganisira Chikumbiro, Muwunga, Sandara, neSt Michaels pamwe chete neMambo Secondary.
Amai Juliet Chemhere, avo vane makore makumi mashanu nemashanu ekubererkwa, vane vazukuru vaviri, Kimberly naOnias, avo vavari kuchengeta.
Amai Chemhere ichirikadzi uye havashande. Amai Chemhere vanoti vane mufaro mukuru nekuti vakawanawo rubatsiro rwekubhadharirwa mari yechikoro yevazukuru vavo.
Kimberly, uyo ari mugwaro rechinomwe paMuwunga Primary School kuAscot, anotsinhira mufaro waambuya vake achiti achadzidza nesimba kuitira kuti agobudirira muhupenyu hwake.
Kunze kwevana vavari kutanga kubhadharira mari yechikoro gore rino, veRiver Valley Properties neveChampions Ministries vave nemakore ane chitsama vachibhadharira vamwewo vadzidzi.
Vamwe vevadzidzi ava vanosanganisira Juliet Magwidi ari kuita Form Four, Takesure Matemera, uyo atanga zvidzidzo zveForm Five paMambo Secondary School, pamwe naTakudzwa Tafirei, uyo ave kuita zvidzidzo zvePolitics and Public Management paMidlands State University.
Takesure, uyo ane makore makumi maviri ekuberekwa, anoti hupenyu hwakatanga kuomera mhuri yavo mushure mekunge baba vake vashaya ndokusara achigara naamai vake avo vasingashande.
Amai Smelly Dube ndivo mukuru mukuru weRiver Valley Properties.
Amai Dube vanoti zvakakosha kuti vemakambani vasangounza budiriro nekuwanisa vanhu mabasa chete, asi kuti vakwanise kubatsirawo vamwe vanhu vanotambura vemunharaunda mavanenge vari.
Amai Dube vanoti itarisiro yavo yekuti varambe vachibatsira vanotambura. Veruzhinji munyika vanokoshesa dzidzo asi kuoma kuri kuramba kuchiita zvinhu munyika, kwave kuita kuti vakawanda vanetseke nekuendesa vana vavo kuchikoro.
Vamwe vevabereki vasina kuwana rombo rakanaka rekubhadharirwa vana vavo mari dzechikoro, vanoti zvinhu zvinrwadza kuti hurumende iri kutadza kuvabatsira munguva iyo vana vavo vanofanirwa kunge vachienda kuchikoro.